မိုးသညျးထနျစှာ ရှားသှနျးနခြေိနျ တိမျကွားထဲမှ နဂါးတဈကောငျး အမှတျတမဲ့ရိုကျမိ (ရုပျသံ) - Khitalin Media
နဂါး (Nāga) ဆိုသည်မှာ သက္ကတနှင့် ပါဠိဘာသာ စကားဖြစ်ပြီး ဟိန္ဒူနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းဂန်လာ အလွန်ကြီးမားသော မြွေကြီးများကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒဏ္ဍာရီများတွင် နဂါးသည် ခြေထောက်မပါပဲ မီးလျှံများကို အသက်ရှူသော ၊ ကြည့်လိုက်ရုံနှင့် လောင်းကျွမ်း ပြာကျသွားစေနိုင်သည့် မြွေ ပုံသဏ္ဌာန် သတ္တဝါ ဖြစ်သည်။
၎င်းအစွမ်းကြောင့် မျက်စောင်းထိုး၍ ညှို့အားကောင်းသော မိန်းကလေးတို့ကိုလည်း နဂါးဟု ယခုထိတိုင် တင်စား ခေါ်တပ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ခြေထောက်ပါသော နဂါးကိုမူ နယားဟု ခေါ်သည်။ မြန်မာတို့က နဂါးနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်နှင့် ဂုဏ်သတ္တိချင်း ဆင်တူသော အနောက်တိုင်း နှင့်တရုတ် (Dragon) များကိုလည်း နဂါးဟုပင် အလွယ် တကူ ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
အခုတခါမှတော့ Nay Win Htet ဆိုတဲ့ ဖော့ဘ်စ်အကောင့်ကနေ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ပရိသတ်အကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်…ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ အောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်…ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးမှတ်ချက်လေးတွေပေးသွားကြပါအုံးနော်….
နဂါး (Nāga) ဆိုသညျမှာ သက်ကတနှငျ့ ပါဠိဘာသာ စကားဖွဈပွီး ဟိန်ဒူနှငျ့ ဗုဒ်ဓဘာသာ ကမျြးဂနျလာ အလှနျကွီးမားသော မွှကွေီးမြားကို ချေါခွငျးဖွဈသညျ။ ဒဏ်ဍာရီမြားတှငျ နဂါးသညျ ခွထေောကျမပါပဲ မီးလြှံမြားကို အသကျရှူသော ၊ ကွညျ့လိုကျရုံနှငျ့ လောငျးကြှမျး ပွာကသြှားစနေိုငျသညျ့ မွှေ ပုံသဏ်ဌာနျ သတ်တဝါ ဖွဈသညျ။
၎င်းငျးအစှမျးကွောငျ့ မကျြစောငျးထိုး၍ ညှို့အားကောငျးသော မိနျးကလေးတို့ကိုလညျး နဂါးဟု ယခုထိတိုငျ တငျစား ချေါတပျသညျ။ မွနျမာ နိုငျငံတှငျ ခွထေောကျပါသော နဂါးကိုမူ နယားဟု ချေါသညျ။ မွနျမာတို့က နဂါးနှငျ့ ပုံသဏ်ဌာနျနှငျ့ ဂုဏျသတ်တိခငျြး ဆငျတူသော အနောကျတိုငျး နှငျ့တရုတျ (Dragon) မြားကိုလညျး နဂါးဟုပငျ အလှယျ တကူ ချေါဝျေါကွသညျ။
အခုတခါမှတော့ Nay Win Htet ဆိုတဲ့ ဖော့ဘျဈအကောငျ့ကနေ တငျထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကို ပရိသတျအကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော…ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုတော့ အောကျဆုံးတှငျဖျောပွပေးထားပါတယျနျော…ဗီဒီယိုဖိုငျလေးကိုကွညျ့ပွီးမှတျခကျြလေးတှပေေးသှားကွပါအုံးနျော….
Categories ဟာသ Post navigation
သွေးတအားတိုး၍ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းသွားဖို့ အခက်တွေ့နေလျှင်